July Dream: High voltage warning!
Posted by JulyDream at 1:24 PM
လွယ်ပါတယ် မီးတွေအကုန်ပိတ် ဖယောင်းတိုင်လေးနဲ့ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေပေါ့။
သတိ မဟားဒရား ဗို့အားပြင်းသည်
တပတ်ကို ၂၄ နာရီလား၊ တလကို ၂၄ နာရီလား ...ဟဟ
အဲလိုပဲ သူတို့ကို မေးလိုက်ချင်တော့တယ်။
( စင်္ကာပူလို နေ့ညမပြတ်မီးပေးသလို ပေးထားရင် နှစ်ပေါင်း ၄၀ သုံးလို့ရမယ့် ဂတ်စ် တွင်းတွေကိုတော့ သူများနိုင်ငံကိုရောင်း ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ သူတို့က သုံးဖြုန်း လူသတ် ဘုန်းကြီးသတ် အော် တရားကျစရာ။)
သတင်းစာမကိုင်ရ... တီဗွီလှိုင်းရှိသည့် နေရာ မနေရ... ဓာတ်လိုက်တတ်သည်။
အင်း ကျားသား မိုးကြိုး..
၂၄ နာရီ ဓါတ်အားလောက်များ.. ပေးချင်ရင်
အမ တာဝန်ကျခဲ့ဖူးတဲ့ နယ်မြို့လေးမှာ ၁၉၉၄ လောက်တုန်းက
တနေ့ကို ညဉ့်ဦး ၄ နာရီ မနက် ၂ နာရီ နေ့စဉ်ပုံမှန်
နောင် နှစ်ပေါင်း ရွေ့လျားလာတော့..
ခု အဲဒီက လူတွေ ပြောတာက တော့..
၄ ရက်မှာ ၁ ကြိမ်. တခါလာတော့ ၂ နာရီခွဲ တဲ့..း)
အမတို့ ရဲ့ ရွှေမျိုးပေါက်ဖော်တွေဆီက
အိမ်သုံးမီးစက်တွေရဲ့ ရောင်းအား တက်ခဲ့သလို..
ရေနံဆီ၊ ဓါတ်ဆီ ရောင်းသူတွေ.. ရောင်းခွင့်ရှိတဲ့ဌာနတွေ
အကောင်းဖက်က လှည့်တွေးတာ ပါ....း)
ဒီစကားလေးပြောတဲ့ ဦးမောင်မောင်လတ်ကို ဦးစွာပထမ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
သတိ။ ။ ၂၄နာရီလို့ပဲပြောထားသည်။ တရက်လား တလလားမပြောထားပါ။
မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မသိသလိုပဲ လုပ်သွားတယ် ..
၂၄ နာရီအပြည့်က ရနေကျပါ .. ၁ရက်လား ၁လ လား .. ကြိုကြားကြိုကြားပျက်တာတော့ နားလည်ပေးရမှာပေါ့ ..
နားလည်ပေးလက်စနဲ့ နောက်ပိုင်း တိုးတိုးပျက်ပျက်ပြီး မီးအားတွေဇောက်ထိုးဖြစ်နေတာလဲ နားလည်ပေးလိုက်ပါတယ်လေ .. :D
ဘာလို့ 'နဂိုကတည်းကလည်း ၂၀၁၀ ကို မြန်မြန် ရောက်ချင်နေတာ" လဲ။
ဒီပို့စ်ဖတ်ရင် ဓာတ်လိုက်မည် သတိထား...။ :)))
ဂယ်ဆိုရင် ပျော်စရာကြီးပေါ့။ :D
ဇူလိုင်လမွေးတဲ့ အရူးတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ၂၄ နာရီ မီးလာပါမယ် မျှော့ :P
ဇူလိုင်လရောက်ရင် ရန်ကုန်ပြန်ပြီး ဂုဏ်ပြုပွဲ တက်လိုက်ဦးလေး)
2010 မျှော်တယ် ဆိုတာ စဉ်းစားစရာပဲ။
ဒုက္ခပဲ။ ပိုက်ပိုက်လေးစုပြီး ဖယောင်းတိုင်ကုမ္ပဏီ ပြန်ထောင်မလို့စဉ်းစားထားတာ၊ ခုတော့ ရေစုံမျှောပြီ။
မီးအားမြှင့်စက်ကုမ္ပဏီပဲ ပြောင်းထောင်ရကောင်းမလား၊ မီတာခလိုက်ဖတ်တဲ့ Servicing ပဲလုပ်ရ ကောင်းမလား။
တစ်နှစ် တစ်ကြိမ် ဇူလိုင် လ မြန်မာ့ ........
အမလေး ဓါတ်လိုက်တယ်ဟ ဒီပို့ စ်က :)
စောင့်ကြည့်အုံးမယ် ကိုဂျူလိုင်ရေ။ Seeing is believing !
၂၄နာရီရမယ်ဆိုတာ သူ့အဘတွေ နေတဲ့ ရပ်ကွက်တွေပဲ ဖြစ်နေပါအုံးမယ်။
(အံတိုနေပါပြီကွ..သိရဲ့လား၊ ပါးစပ်ဟ ပြသွားသည်)
((((((((( ဇစ် ))))))))))))))))))))
is it real? i don't want to beleive it. i think you are makingajoke.
တနှစ် ၂၄ နာရီ ဖြစ်ပြီး
တနေ့ ၂၄ နာရီ ဖြစ်ပါသည်... လို့
ကလူသစ် ဇစ် ဖြုတ်သွား?
ချိုကို သဇင် ဓါတ်လိုက်သွား
စောဖိုးနု တနှစ်တကြိမ် ပြော
ဖိုးသင်္ကြန် ဒုက္ခ တသွား
တောင်ငူ ဂုဏ်ပြုပွဲ တက်မည်ပြောသွား
တူးတူးသာ အရူးတွေ အတွက်ဟု ပြောသွား
အမဲရောင် အိမ်မက် သို အိမ်မက် အမဲ ဂလိုလား မေးသွား
ဇွန်ဝမ်း ဘာလို့ မေး
နွေးနေခြည် တရက်လား တလလား
ရွာသား နှစ်ခွရေး အယ်လေ နှစ်မျိုးရေးပေးသွား
အယ်ဇီးးးးးးးးးးးးးးးးးကော့မန် များက ပြောသောစကား ကို လေ့လာသွား
၀န်ကြီး တစ် ယောက်က လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးကို ပြောတာပေါ့
အဲဒီတုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့ ၄ ၊ ၅ နှစ်ပေါ့
နောင်နှစ်ကျရင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး မီးတွေ ထိန်ထိန်လင်း ပြီဆိုပေါ့ ၊ မေးပြောလေးပေါ့ ၊ အားရ
၀မ်းသာနဲ့ လျှပ်စစ် ၀န်ကြီးကို ပြောတာပေါ့ ၊ ခုန အစည်းအဝေးမှာ သူက ဘာဘာညာညာတွေ ပြောသွားတာ အားလုံးကြားတာကိုး ၊ ပြီးတော့ သူက ပဲ ဆက်ပြီး သူဘာသာဖြေသွားတယ် ၊ ဟုတ်တယ်လေ အခုပြည်သူတွေ အကုန်လုံး မီးစက်တွေ ၀ယ်ပြီးသွားပြီ ၊ ကိုယ်အားကိုယ်ကိုးနဲ့ အားလုံး လင်းပြီပေါ့ဗျာတဲ့ ၊ လျှပ်စစ် ၀န်ကြီးကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဟဲဟဲ ပေါ့ အဲဒါတကယ်ဗျ ....
အင်းးးးးးးး ကျွန်တော်တို့ တသက်တော့........ မထင်......
ဖိုးသူတော် ကြေးစည်ထုတော့ ဘာသံထွက်လာလဲ သိလား ......................
မီးတွေ၂၄နာရီ လာနေတာပဲ။. အဲဒါဘယ်သူတွေလဲ သိလား.. သူတို့ လူကြီးပိုင်းတွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်မီးစက်ရှိသူတွေပေါ့ဗျ။
ကိုယ်တွေ့ တနေကုန်မီးလာတာ ကြုံရင်တောင်မှ
ကိုယ့်အသားကို အပ်နဲ့စိတ်ကြိုက်ထိုးပြီး ရစရာ
မရှိအောင် အသားတွေ ပေါက်ပြဲသွားမှယုံမယ်။
ဒါတောင် မသေချာဘူး ကိုယ်အပ်နဲ့ထိုးတဲ့ တနေ့ပဲ တနေကုန်လာရင် သေပြီဆရာပဲ ဟားဟားဟား